Izindaba - Sizohambela Umbukiso WaseChinaplas 2021 E-Shenzhen Kusukela ngomhlaka-13 Ephreli Kuya Ku-16 Ephreli.
Sizokuya Embukisweni WaseChinaplas 2021 E-Shenzhen Kusukela ngomhla ka-13 ku-Ephreli Kuya Ku-16 Ephreli.
Sizoya embukisweni we-CHINAPLAS 2021 eShenzhen kusuka ngomhlaka 13 Ephreli kuya kumhlaka 16 Ephreli.
Okulandelayo ulwazi oluningiliziwe ngalo mbukiso:
Idokodo Lethu Cha: 16W75
Usuku lombukiso: 13, Ephreli. kuya ku-16, Ephreli.
Imikhiqizo yethu: Amashidi e-PVC, amashidi e-PP, amashidi e-HDPE, izinduku ze-PVC,
Amapayipi we-UPVC nokufakwa, amapayipi we-HDPE nokufakwa
Amapayipi nokufakwa kwe-PP ne-PPR, izinduku zokushisela ze-PVC PP.
Iwebhusayithi yethu: www.ldsy.cn www.lidaplastic.com
Silindele ukuvakasha kwakho!
Incazelo yomkhakha wePlastikhi
Ipulasitiki iphathelene nento enezinto zokwenziwa noma semi semi-synthetic organic compounds ebumbekayo futhi ebumbeke kalula ezintweni eziqinile. Izici zabo zomshini nezishisayo – ukuqina, ukumelana nokubola kanye nokungathambeki – kubenza babe izingxenye ezinhle ekukhiqizeni. Lapho ipulasitiki isetshenziswa njengezakhi zokwenza imishini yokuqala (i-OEM), kwesinye isikhathi kubhekiswa kuzo ngokuthi amapulasitiki obunjiniyela.
Ama-plastiki aziwa ukuthi anezici zokusebenza eziphezulu. Ukonga isisindo, ama-insulators amahle, ama-thermoformed kalula futhi amelana namakhemikhali, ingasaphathwa eyonga imali. Ngakho-ke, amanye amaplastikhi abunjiniyela avame kakhulu embonini yeplastikhi, ngaphandle kwamakhemikhali enjoloba afana ne-Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) asetshenziswa kuma-computer monitors, kuma-printers nakuma-keyboard caps, ama-Polyurethanes (PU) asetshenziswa njengezingxenye zepulasitiki eziqinile zezinto zikagesi noma ukumiswa kwezimoto. , IPolycarbonate (PC) esetshenziselwa ama-compact disc, ama-MP3 nezingcingo kanye namalambu ezimoto, i-Polyethylene (PE) esetshenziselwa ukufakela amakhebuli necala elibunjiwe lepulasitiki ne-Polypropylene (PP) esetshenziselwa abathengi be-elekthronikhi, ama-car fenders (ama-bumpers) nezinhlelo zepayipi lokucindezela ipulasitiki ) –Ubuyisele ezinye izinto zobunjiniyela bendabuko njengensimbi nokhuni.
Kusukela ngo-2013, iChina ibe ngumkhiqizi wepulasitiki omkhulu kunabo bonke emhlabeni, ibala cishe ingxenye eyodwa kwezine yomkhiqizo wepulasitiki emhlabeni jikelele, ngokusho kweStatista. Imboni yeplastikhi eChina ibone imiphumela ekhulayo yokukhiqiza eminyakeni edlule, ngenxa yesidingo esikhulayo samaplastiki ezobunjiniyela ezimbonini ezisezingeni eliphakeme njengokuhlangana kwezimoto nokukhiqizwa kwe-elekthronikhi. Ngo-2016, kwakukhona izinkampani ezingaphezu kuka-15,000 zokukhiqiza amapulasitiki eChina, imali etholwayo yokuthengisa ifinyelela cishe ku-2.30 trillion CNY (US $ 366 billion). Ukukhiqizwa kwepulasitiki kwangaphakathi kwe-2017 kuya ku-2018 kufinyelele kumathani ayizigidi ezingama-13.95 womkhiqizo wepulasitiki nezingxenye zepulasitiki.